Achizarura, Kunyora uye theming rimwe .shp faira chete Microstation V8i
Munyaya ino tichaona kuti kuvhura, theming uye inotora munhu SHP faira uchishandisa Microstation V8i, chete anoshanda Bentley Map. Kunyangwe iwo ari echinyakare 16-bit mafaera, ekare senge mamwe -many- eangu grays, hazvidzivirirwe kuti ivo vanoramba vachishandiswa mune yedu geospatial mamiriro. Chokwadi, izvi zvinodiwa kushandiswawo chokuita vector zvinhu ...
CartoDB, yakanakisisa kusika mepu paIndaneti
CartoDB ndeimwe yeanonakidza mafomu akagadzirwa ekugadzira emepamhepo mepu mamepu munguva pfupi kwazvo. Yakaiswa paPostGIS nePostgreSQL, yakagadzirira kushandisa, ndeimwe yeakanakisa andaona ... uye kuti iri danho rekutanga kweSpanish, rinowedzera kukosha kwariri. Mafomati ayo ainotsigira Nekuti iko kutarisisa kukura ...
Geospatial - GIS, Innovations, Internet uye Blogs
OkMap, yakanakisisa pakusika uye Edit GPS mepu. FREE
OkMap pamwe ndeimwe yemapurogiramu akasimba kwazvo ekuvaka, kugadzirisa uye kugadzirisa mepu dzeGPS. Uye hunhu hwayo hunokosha kwazvo: NdeMahara. Tese zvedu tine rimwe zuva takaona kudiwa kwekugadzirisa mepu, georeference mufananidzo, kurodha fomu refaira kana kml kuGarmin GPS. Mabasa akadai ndeaya ...
Google Earth VanaChiremba vezvirwere zvese Kml Shp
Google pasi / mamapu, GPS / Equipment, kuororwa
Posify, low cost GPS centimeter precision
Ichi chigadzirwa chakaburitswa nguva pfupi yadarika kuESRI Musangano weVashandisi kuSpain, svondo rapfuura uye izvi zvinotevera vachange vari paTopCart muMadrid. Iyo GPS yekumisikidza uye yekuyera sisitimu iyo inotsigira post-kugadzirisa, iyo ine masendimita mhedzisiro inogona kuwanikwa. Hapana zvinoitwa nevamwe ...
MobileMapper Field nhau uye MobileMapper Office
MunaJune 2011, shanduro nyowani dze software dzakashandiswa muAshtech michina dzakaburitswa, saka kana uchitenga michina mitsva, idzi shanduro dzinogona kunge dzisingasvike dzakaiswa. Ini ndinotora chinyorwa ichi kuratidza kubva kwavanogona kurodha pasi, pamwe neazvino matsva maficha eichi chiitiko: Kana ...
VanaChiremba vezvirwere zvese Shp
Yakanakisisa yeZonum yeCAD / GIS
Zonum Solutions inzvimbo inopa maturusi akagadzirwa nemudzidzi paUniversity yeArizona, uyo munguva yake yekuzvitsaurira akazvipira kukodhi misoro ine chekuita neCAD maturusi, mepu neinjiniya, kunyanya ne kml mafaera. Zvichida chakakurumbira ndechekuti dzakapihwa mahara, uye kunyangwe ...
Cartography, Google pasi / mamapu, GPS / Equipment, Engineering
Kuguta kweguta, hurukuro ye2011
Nyaya yehuwandu hwevanhu ichave yakakurumbira gore rino - uye zvinotevera - nekuti hapana zvakawanda zvekuita kugadzirisa mhinduro pasirese. Tarisiro yegore rino yeNational Geographics ndiyo chaiyo huwandu hwenyika pasikati pekugadzirisa kusvika pamabhiriyoni manomwe. Iyo yaJanuary edition ndeye muteresi's classic. The…
Cartography, Google pasi / mamapu, Innovations
Sezvo Mapserver anoshanda
Nguva yekupedzisira patakataura nezve mamwe maitiro nei MapServer uye mabhesheni ekumisikidza. Iye zvino ngatione chimwe chinhu chekushanda kwayo muchiitwa nemamepu eshamwari dzeChiapas. Kwokukwidza Kamwe Apache yaiswa, iyo yekushambadzira yakasarudzika dhairekitori yeMepServer ndiyo OSGeo4W dhairekita yakanangana pamusoro C: / Mukati, pane ...
Google Earth siyana GIS mapserver Shp
Version Kusawirirana MobileMapper Office uye MobileMapper Office 6
Muzvinyorwa zvekupedzisira isu tanga tichitaura nezve data rakaburitswa kubva kumakomputa eMagellan, uye kubva ipapo kunomuka kudikanwa kwekujekesa nezve dzakasiyana shanduro dzeMobileMapper Hofisi. Iyo MobileMapper 6 Hofisi Ichi chidimbu che software, iyo inouya kana iwe ukatenga iyo MobileMapper 6, iri software nyowani, iyo iri mushe mushanduro 1.01.01 ...
ESRI VanaChiremba vezvirwere zvese Shp
peji 1 peji 2 peji 3 peji 4 peji Next
Iyi kosi yeAulaGEO inodzidzisa kushandiswa kweRevit kuita modhi, dhizaini uye kuverenga masystem emagetsi. Iwe unodzidza ...